Ikhosi ye-GvSIG isetyenziswe kwiCandelo loThutho - ii-Geofumadas
Ikhosi ye-GvSIG isetyenziswe kuCwangciso loThutho
Agasti, 2012 Ukufundisa i-CAD / GIS, GvSIG
Ukulandela umkhondo weenkqubo ezikhuthazwa yiSigqeba saseGvSIG, siyavuya ukuvakalisa ukuphuhliswa kwekhosi apho iya kuphuhliswa usebenzisa i-gvSIG isetyenziswe kwiinkqubo zoLungiselelo lweSithili.
Le khosi iqhutywa Credia, iphulo umdla wadala kwisicwangciso nokugcinakala Project i Mesoamerican zeBhayoloji Corridor (PROCORREDOR). Indima Foundation, ngaphandle ukuqokelelwa nokugcinwa kweenkcukacha, iinkqubo zemfundo kunye neenkonzo ezizodwa kwindawo mapping. Ukuqhagamshelana kwayo kunye ne-Free Software kubonakala ngathi yinkoliso ebalulekileyo kunokuba iiprojekthi ezininzi zidlulayo kwaye emva kokuvalwa kwayo kuza isiqu; xa usebenzisa ifilosofi yesofthiwe ekhululekile ungenza amanethiwekhi abasebenzisi ngaphaya kwedatha, esithemba ukuba iya kuba nefuthe elihle ekulawuleni ukugcinwa kolwazi. Ingxenye yale nto yabonakala kuyo Catastro Symposium Yenza iintsuku ezimbalwa ezedlule, i-inshorensi ye-CREDIA iya kuba yenye yezona zinto zibalulekileyo ezibalulekileyo ekusekeni uluntu abasebenzisi be-GvSIG eHonduras.
Ukubuyela kwikhosi, oku kubonisa ithuba lokufunda usebenzisa izixhobo zoLwazi lweeNdawo zoLwazi ezisetyenzisiweyo kwiCwangciso loPhuhliso. Iingcamango ezisisiseko ziya kuhanjiswa malunga nokucwangciswa kwenkqubo kunye neNkqubo yeeNdawo zoLwazi, ukwazi ezinye iimeko ezenziwe eHonduras.
Umxholo wekhosi uhlukaniswe ngamacandelo amathathu:
Kwizinto zokuqala, imiba yezoCwangciso zoThutho, iipattography kunye neNkqubo zoLwazi lweGaographic ziza kuboniswa. Oku kulindeleke ukuba level ababekhona ngokuphathelele ukusetyenziswa into ilizwe mapping isicwangciso phantsi kwamagunya olawulo ukusetyenziswa, kwaye ezinye indlela. Ngemva kwemini, i-gvSIG iya kufakwa kwaye isicelo esisebenzayo kumxholo we-cartographic iya kuqala.
Ngomhla wesibini, iziganeko ezisebenzayo ze-gvSIG ziya kusebenza kwiindawo zokuyalela. Indlela umdla kuba bayayo uya kufunda ukusebenzisa gvSIG ngaphandle kokuba ukuxakeka ngamaqhosha kodwa isicelo kwamatyala ukusetyenziswa.
Ngosuku lwesithathu, luya kufakwa kwiiplani zoLawulo loMhlaba.
Imihla yi-5, i-5 kunye ne-7 ka-Septemba ye-2012.
Indawo: Isiko soMmandla weMibhalo kunye nokuTsikiswa kweNdalo (CREDIA), eLa Ceiba, eHonduras.
Ixabiso labafundi, iziseko, oomasipala kunye nee-NGOs zincinci ngaphezu kweerandi ze-150, kubandakanywa ikhefu kunye neentsuku.
Akukho nto iseleyo yokuncoma ikhosi
Olunye ulwazi malunga nale nkqubo nezinye iikhosi:
Post edlulileyo«Edlulileyo Inkcubeko entsha yokufunda
Post Next GPS kunye Google Earth in CooperationOkulandelayo "